Ivan Rakitić oo la filayo inuu door muhiim ah ka ciyaaro dib ugu soo laabashada Neymar Jr ee kooxda Barcelona – Gool FM
Ivan Rakitić oo la filayo inuu door muhiim ah ka ciyaaro dib ugu soo laabashada Neymar Jr ee kooxda Barcelona
(Spain) 26 Juunyo 2019. Sida ay shaaca ka qaaday saxaafada dalka Spain Ivan Rakitić ayaa la filayaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro dib ugu soo laabashada Neymar Jr ee kooxda Barcelona inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Waxaa jiray warar xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay ku saabsanaa dib ugu soo laabashada ciyaaryahanka reer Brazil ee garoonka Camp Nou, kaddib markii uu ka xumaaday inuu ka tago kooxda reer Catalonia.
Wargeyska “AS” ayaa sheegay in Agaasimaha cusub ee ciyaaraha kooxda PSG Leonardo uu fahansan in Neymar Jr uu doonayo ka tagista garoonka Le Parc des, sidoo kale madaxweynaha kooxda ayaa bilaabay inuu isbadal weyn ku sameeyo kooxda reer France.
Sida uu wargeyska sheegay Ivan Rakitić ayaa la filayaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro heshiiska Neymar Jr uu dib ugu laabanayo kooxda Barcelona, maadaama tababaraha PSG ee Thomas Tuchel uu si aad ah ula dhacsan yahay laacibka reer Croatia, isagoo si aad ah u doonayay inuu lasoo saxiixdo xagaagii lasoo dhaafay, laakiin madaxweynaha Barca ee Josep Maria Bartomeu ayaa diiday wuxuuna dalbaday inuu helo qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa.
Philippe Coutinho ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu heshiiska qeyb ka noqdo, si la mid ah laacibka reer France ee Ousmane Dembélé ayaa qeyb ka noqon kara heshiiskan.
Dani Alves oo Albaabada u furay inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League
Manchester United oo haddii uu ka tago Lukaku la soo wareegeysa mid ka mid ah Weeraryahannada kooxda Arsenal